लौका - विकिपिडिया
लहरामा फलेको हरियो लौका
लौका तरकारी बनाउने सब्जीको प्रकार जो लहरामा फल्छ, विश्वका प्रायः सबै ठाउँमा यो तरकारीको उत्पादन हुन्छ । लौका धेरै थरीका हुन्छन् । लौका मानव स्वास्थ्यलाई निकै फाईदाजनक छ। यसका साथै लौका औषधि पनि हो । लौकामा पित्त, कफनासक, रुचिनासक गुण छ । लौकाको जुस ज्वरो, खोकी, मुटुको विकार, गर्भाशयसम्बन्धि सबै रोगको लागि लाभदायक हुने गरेको छ ।
लौकाबाट निम्न लाभहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ[सम्पादन गर्ने]
रक्त विकारमा आधा गिलास लौकाको जुसमा थोरै मिश्री मिलाएर बिहान बेलुका पिउनाले रगतको विकार कम हुदै जान्छ ।
दातको दुःखाईको समस्या भएमा १ सय ग्राम लौकाको गुदी र २५ ग्राम पिसेको लसुन १ लिटर पानीमा उमाल्ने । आधा नहुञ्जेल यसलाई उमालिरहने । त्यसपछि यसलाई जाली कपडाले छान्ने।    छानेको पानीले कुल्ला गर्ने। दिनमा २-३ पटक यसो गर्नाले दाँतको दुःखाई कम हुन्छ ।
मुटु रोगीले लौकाको तरकारीका साथसाथै १०/२० मि.ली. लौकाको जुस दिनहुा बिहान पिउनाले फाइदा गर्छ ।
पिलो भएको व्यक्तिले दैनिक १५/३० मि.ली. लौकाको जुसमा थोरै मिश्री घोलेर २/३ पटक पिउनाले फाइदा गर्दछ।
मुत्र नलीको जलन
मुत्रसम्बन्धि रोगमा लौकाको रस निकालेर एक चिम्टि सिधे नुन र कागतीको रस मिलाएर दैनिक बिहान पिउनाले मुत्रनली खुलेर आउाछ र मुत्रनलीको दुःखाई हट्छ।
लौकाको रसमा थोरै तिलको तेल मिलाउने। सुत्नुभन्दा पहिला टाउकोमा राम्रोसाग मालिस गर्ने। केहि दिनपछि राम्रोसाग निन्द्रा लाग्न थाल्छ।
रक्तश्रापमा पनि लौका लाभदायक छ। शरीरको कुनै भागमा रगत बगिरहेको अवस्थामा लौकालाई ताछेर ताछेको बोक्रा पिसेर त्यस ठााउमा लगाउने र पट्ट बााध्ने। यसले बगेको रगत रोकिन्छ। यसका साथै लौकाको रस पनि पिउने।
ज्वरो, पित्त र बाथ
ज्वरो आएको बेला २० मि.ली. लौकाको रसमा थोरै मिश्री मिलाएर सेवन गर्दा लाभ हुन्छ । यसले बात, पित्तको समस्यामा पनि लाभ पुग्छ ।
गर्भाशय सम्बन्धि समस्या
गर्भाशय सम्बन्धि समस्यामा लौकाको रस निकै लाभदायक मानिन्छ। पटक पटक गर्भपतन हुने महिलाहरूले लौकाको रस तथा तरकारीका रूपमा अवश्य खान आवश्यक हुन्छ । यसले गर्भाशय मजवुत भई गर्भपतन हुने समस्याबाट छुटकारा दिलाउन मद्दत गर्छ ।
विकिमिडिया कमन्समा लौका सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=लौका&oldid=919458" बाट अनुप्रेषित